Muqdisho: Maydadka dhalinyaro midkood Qoorta laga jaray oo laga helay xaafado kala duwan | Xarshinonline News
Muqdisho: Maydadka dhalinyaro midkood Qoorta laga jaray oo laga helay xaafado kala duwan
Muqdisho,(NNN)- Maydadka laba Wiil oo dhalinyar ah oo mid ka mid ah Madaxa laga gooyay, ayaa shalay laga helay Degmo ka mid ah Degmooyinka magaalada Muqdisho.
Siday sheegayaan Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ee Soomaaliya, mid ka mid ah labadan Wiil ee dhalinyarada ah ayaa maydkiisa la helay Isgoyska Bakaaraha ee magaalada Muqdisho oo ay Wararku sheegeen inay Kooxaha Dawladda Shariifka ka horjeedaa xoog ku leeyihiin, kaas oo la helay Qoortiisa oo gaar u go’an iyo qaybta kale ee Jidhkiisa oo hareer taalla.
“Wiilka aan mayadkiisa saaka (shalay) aragnay waxaanu ku qiyaasnay da’diisa 21-sano, lugaha ayuuna ka xidhnaa, qoortiisana waxaa la dhigay dhinaca midig ee jidhkiisa.” Sidaa waxa yidhi mid ka mid ah dadkii arkay Maydka Wiilkan oo aan la aqoonsan sababta loo dilay iyo cidda dishay toona.
Dhinaca kale, Mayd kale oo Wiil isna dhalinyaro ah oo toogasho lagu dilay, ayaa shalay lagu arkay Degmada Wada-jir ee isla magaalada Muqdisho, kaas oo la sheegay inay Kooxo hubaysan oo Gaadhi watay ay dhigeen halkaa. Gabadh ay walaalo yihiin Wiilkan oo magaceeda ku sheegtay Yaasmiin Mayow ayaa sheegtay in aanay la ogayn sababta loo dilay Wiilkooda iyo cidda dishay, hase yeeshee, uu dhawaan ka tegay dalka Yugaandha oo qorshihiisu ahaa in uu u dhaafo dhinaca Qaaradda Yurub.
← Maxkamad Xukunno Dil iyo Xadhig Isugu jira ku ridday eedaysanayaal loo haystay dilka Taliyihii qaybta 12-aad ee Ciidanka Qaranka
“M/weynuhu inta uu ii yeedhay buu igu yidhi ii codee, aniguna waan ka diiday. Sababtoo ah..” →